Fanampiny samihafa ao amin’ny renipejin’ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Marsa 2008 12:49 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Shqip, English
Nandritra izay efatra taona mahery nijoroan'ny tetikasa izay, dia tsy nitsaha-nitombo sady nanjary nihoatry ny fehin-dahatsoratra amin'ny blaogy eran'izao tontolo izao fotsiny ny Global Voices izay mibahan-toerana eto amin'ny renipejy. Raha mbola tsy tsikaritrareo, dia nisy fiovana kely samihafa eo amin'ny renipejin’ny Global Voices mba hanomezan-toerana bebe kokoa sy hanamory ny fitarihana any amin'ny lafiny hafa amin'ny tetikasa.
Ny vohikala mampiantrano ny tetikasa Lingua, izay fandikanteny ireo lahatsoratra Global Voices amin'ny teny Anglisy ho amin'ny fiteny samihafa izay mihoatry ny 13 dia mirohy ankehitriny amin'ny ilany ambony havanana amin'ny renipejy.
Ny matoam-pejy hoan'ireo Tatitra Manokana [Special Coverage], izay miezaky ny hanambatra ireo atontan-dahatsoratra fijoroana vavolombelon'ny olontsotra marobe marobe [citizen media | media citoyen] amin'ny lohahevitra manokana toy ny fitokanana fanoheran'ireo Mpanokantena tany Myanmar , ny famonoana an'i Benazir Bhutto's, ny rotaka sy ady an-trano taorian'ny fifidianana tany Kenya ary vao tsy ela akory, ny hetsika fanoherana niseho tany Tibet, ireo rehetra ireo ankehitriny dia mirohy ava yhatrany ambanin'ny sora-baventy Global Voices, avy eo indray dia misy rohy tsirairay mitondra ho any amin'ireo lohahevitra izay velabelarin'ny Tatitra Manokana.
Hamaranana azy anefa tsy azo atao ho bitika velively, misy rohy sora-baventy mitarika ho any amin'ireo tetikasa manokana isam-paritra dia ny Fanandratam-peo na Rising Voices, sy ny Fisoloam-bava eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na Global Voices Advocacy ary ny tetikasa manokana novelabelarina mandritra izao fifidianana izay ho filoham-pirenena Amerikana izao Feo hoan'izay tsy mpifidy ny Voices without Votes, izay hita ankehitriny amin'ny ilany ankavanana sady anilan'ireo rohin-dahatsoratra.
2 ora izayMediam-bahoaka